Sosialim-bahoaka : mbola hitohy ny vatsin’ankohonana | NewsMada
Sosialim-bahoaka : mbola hitohy ny vatsin’ankohonana
Nibahana tao anatin’ny kabarin’ny filoham-pirenena, omaly teny Iavoloha, ny sosialim-bahoaka izay nanana ny anjara toerany tamin’ny taon-dasa, raha ny tombana nataony.
Voakasika avokoa ny sehatra sosialy rehetra ary anisan’ny tena nasiany teny ary nanomezany toky fampanantenana ny mbola hitohizan’ny tetikasa vatsin’ankohonana.
Hitarina amin’ny faritra dimy ity tetikasa ity raha ny filazan’ny filoham-pirenena. Notsimbinina manokana ny ankizy sy ny renim-pianakaviana tamin’izany. Mitentina 40 tapitrisa dolara avy amin’ny Banky iraisam-pirenena ny vola entina manatanteraka io tetikasa io. 5 hetsy mahery ny nahazo tombontsoa mivantana amin’izany ary vehivavy avokoa ny 65% amin’ireo. Hatomboka amin’ny herinandro ho avy izao ny ny tetikasa vatsin’ankohonana any amin’ny faritra Analanjirofo.
Nasiany fampanantenana ihany koa ny famatsian-drano madio. Hahazo rano madio atsy ho atsy ny any Androy izay efa nijaly fatratra amin’ny rano.
Vao vita ary notokanana farany teo ny famatsian-drano any Morafenobe, mamatsy olona hatrany amin’ny 16.000 any ho any. Teo koa ny sinibe goavana fitehirizan-drano 10 sy kelikely enina tamin’ny tanàna maromaro eto amin’ny firenena.
Teo amin’ny sehatry ny fampianarana, betsaka ny tafaverina an-tsekoily. Maherin’ny 1.600.000 ny ankizy nizarana kojakojam-pampianarana. Mitentina 14 miliara Ar ny vola nanampiana ny sekoly. Novatsiana sakafo ihany koa ny ankizy 3 hetsy mahery any an-tsekoly ho fanohanana azy ireo amin’ny fianarana.
Nahazo ny anjarany ihany koa ny mpampianatra tamin’ny taon-dasa. Mpampianatra Fram 20.000, efa tafiditra mpiasam-panjakana raikitra. Hitohy hatrany izany fandraisana mpampianatra ho lasa mpiasam-panjakana izany raha ny toky sy ny fampanantenana hatrany.
Ankoatra izany ny fanofanana ny talen-tsekoly sy ny fizarana môtô ho an’ny sefo Zap manerana ny Nosy.
Niasa teo amin’ny sehatry fahasalamam-bahoaka ihany koa ny fanjakana. Nosokafana avokoa ireo CSB anjatony nikatona teo aloha. Ankizy 11 tapitrisa no vita vaksiny tamin’ny alalan’ny hetsika fanaovam-baksiny faobe sesilany teto amin’ny firenena.